တင်ခဲ့သည်အမေရိကန်ရေနံမြင့်တက်ရထား - rayhab ဖြစ်ပါသည်
[10 / 09 / 2019] တောင်ကိုရီးယားရန်မီးရထားနည်းပညာဂရိတ်လမ်းမကြီးဧဒင်ကြမ်းပြင်လည်ပတ်မှုအတွက် TCDD	82 ကိုရီးယား (တောင်ပိုင်း)
[10 / 09 / 2019] ဧဒင်ဥယျာဉ် Corlu ရထားအဖြစ်ဆိုးကိစ္စတွင်အပေါ်စကားရပ်တုန်လှုပ်	59 Corlu
[10 / 09 / 2019] ပေးဖို့န်ကြီးဌာနက Metro ယာဉ်ဝယ် Konya 1 ၏ဘီလီယံအကူအညီပေးခြင်းကိုပြောင်းရွှေ့	42 Konya
[10 / 09 / 2019] အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ် Halkalı Metro တူးဖော်မှုစတင်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[10 / 09 / 2019] နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ရွေးချယ်မှု: 'Mersin Metro မူရင်းလုပ်ငန်းခွင်များတွင် Next ကိုခြေလှမ်းများ' '	34 အစ္စတန်ဘူလ်
31 / 12 / 2013 Levent Ozen 1 အမေရိကတိုက်, အမေရိကန်, ခရီးဝေးရထားစနစ်များ, လောက, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း 0
အမေရိကန်သည်အခြားရထားပျက်ကျမှုအနီးရေနံစိမ်းတင်ဆောင်တဲ့ရထား Casselton မြို့၏မြောက်ဒါကိုတာပြည်နယ်kapladı.abd'nရထားမီးတောက်များနှင့်မီးခိုးမိုဃ်းကောင်းကင်၏ပေါက်ကွဲသံ၏ရေနံစိမ်းဝန်လက်ရှိရေနံ-ဝန်ကိုထမ်းရွက်ထွက်လာမယ့်မီးလျှံများနှင့်လှည်းများတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောမတော်တဆထိခိုက်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်အမေရိကန်ရေနံရထား Surges Installed မီးခိုးမိုဃ်းကောင်းကင်ဖုံးလွှမ်းကြ၏။ BNSF မီးရထားမတော်တဆမှုနှင့် ပတ်သက်. ကြေညာချက်ကိုဖန်ဆင်း Sözcüs ကိုမေီ McBeth သူစပါး, vagonluk သူတို့ရဲ့လိုင်းရထားမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားသည့်မှောက်ရထားတိုက်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်ရေနံစိမ်းတင်ဆောင်ကြောင်းပြောသည် 106 ဖြတ်သန်းသောမီးရထားလမ်းနှင့်အတူဝန်ကိုထမ်းရွက်နေတဲ့ရထား၏ဘေးထွက်ကျော်ဖြုတ်ချ။
အဆိုပါပေါက်ကွဲမှုသည်မိုဃ်းကောင်းကင်သို့အနက်ရောင်မီးခိုးများထုကီလိုမီတာမွို့၌အိမျတျောကိုလှုနှင့်2ကနေမြင့်တက်မြင်နိုင်ပါသည်ပြီးနောက်မတော်တဆမှု၏မြင်ကွင်းတစ်ခုကနေ Casselton ကီလိုမီတာအတွင်းပေါက်ကွဲမှုများ၏ 1,5 25 နာရီအတွင်းကမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ရထားရဲ့လှည်းများ၏မတော်တဆပေါက်ကွဲမှုနှင့် ပတ်သက်. တရားစွဲဆိုရေနံစိမ်းမှာအနည်းဆုံး72 500 Casselton သတိပေး၏မြို့တထောင်သူမြို့သားနေထိုင်သူများအဘို့အိမ်တော်ကိုအတိုင်းအတာထဲကသွားကြဖို့မဟုတ်ခဲ့ပေ။
ရေနံစိမ်းတင်ဆောင်ရထားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ (ဗီဒီယို) ပေါက်ကွဲ 17 / 02 / 2015 အမေရိကန်ရေနံစိမ်းဝန်ကိုထမ်းရွက်ရထားကိုတက်လွခဲ့သည်: ရထားပေါ်တွင်တင်ဆောင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရေနံစိမ်းအနောက်ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်လွဲချော်ရပ်တန့်ခဲ့သည်။ အနည်းဆုံး 10 လှည်းပန်းခြံသို့ကားကိုဝင်တိုက်ရထားအတူတက်မှုတ်။ တစ်ဦးအနေအထားအတွက် Kanawha နှင့် Fayette မတော်တဆမှုလူနေအိမ်ရှိပါတယ်ရှိရာမြို့များအကြားဖြစ်ပွားခဲ့သည်အပျော်တမ်းကင်မရာတွင်ထင်ဟပ်။ အဆိုပါအုပ်ချုပ်ရေးမှူး, ဒေသခံနယ်မြေရွှေ့ပြောင်းလျက်ရှိ၏ ဒါဟာတစ်ဝှမ်းပျံ့နှံ့မီးခိုးကြောင့်ထိခိုက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကကုသခံနေရကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ မတော်တဆမှုမြင်ကွင်းတစ်ခုအနီးရှိအိမ်တအိမ်မီးအတွက်ဖြစ်ရပ်များ၏သက်ရောက်မှုပြာကိုလှည့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မြောက်ဒါကိုတာရထား Yorktowne 109 ထံမှနည်းပြသယ်ဆောင်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ မိုးသည်းထန်စွာနှင်းကျအောကျပျက်ကျမှု site ကိုမှာတစ်ဦးမီး ...
အမေရိကန်ရထားမတော်တဆဖြစ်ပွားမှု: ဒဏ်ရာရသူ426 / 09 / 2013 အမေရိကန်ရထားမတော်တဆဖြစ်ပွားမှု:4ဒဏ်ရာရ: တက္ကဆက်ပြည်နယ်၏အမေရိကန်ပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းအသွားအလာမတော်တဆမှုအတွက်လူလေးဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါလွဲသွား၏နံနက် 30 အကြောင်းမရှိအတွက် Amarillo ၏မြို့အနိုင်ရခဲ့သည့် Instution ပြည်သူ့လုံခြုံမှု, ကနေကြေငြာချက်ထဲမှာပဲအရှေ့ကဖော်ပြခဲ့သည်ခဲ့ရထားလမ်း၏ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အကြီးတန်းရဲအရာရှိခရစ် Ray, ရထားနောက်ဘက်-အဆုံးတိုက်မှုအပေါ်ရပ်နေသည်ကိုအရှေ့ဘက်သို့သွားသောရထားအနိုင်ရရထားအနောက်ဘက်သို့သွားသောရထားအခြားနှစ်ခု၏အပျက်အစီးများ၏ထိတ်လန့်ပြီးနောက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟုသူကဆိုသည်။ BNSF ရထားလမ်းကုမ္ပဏီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဂျိုး Faust မူတည်ပြီးမတော်တဆမှုလေးမီးရထားအရာရှိများကလေးနက်အခြေအနေကသူတို့ကိုနှစ်ခုကပြောသည်ဒဏ်ရာရတွေ့ရှိခဲ့ဟုပြောသည်။ ပွင့်လင်းထရပ်ကားနောက်တွဲယာဉ်တင်ဆောင်ရထား ...
အမှန်တကယ်အကြောင်းပြချက်အမေရိကန်ရထားပျက်ကျမှု၌ပေးသောခဲ့သည် 10 / 12 / 2013 ရထားမတော်တဆမှုများ၏အကြောင်းရင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်: ရထားမတော်တဆမှုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည်အကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမရှင်းပြချက်ရှိ၏။ နယူးယောက်စီးတီးရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဒီတနင်္ဂနွေရဲ့ရထားမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်များနှင့်4လူများစက်လုပ်သမားရဲ့အိပ်စက်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်, သူတို့ဘဝဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုလည်းရထားသုံးကြိမ်ပုံမှန်နှုန်းကိုပေးရန်ကွေးရဲ့ access ကိုဝင်ကြ၏ဟုပြောသည်။ စက်လုပ်သမားရဲ့အိပ်စက်ခြင်းနှင့်မတော်တဆထိခိုက်မှုများကွေးဝင်ရောက်ကြောင်းလွှဲမရှောင်သာဖော်ပြထားသည့်အခါအလွန်အကျွံမြန်နှုန်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ နယူးယောက်မှာတော့4လူတွေအနီးအနားမှာရထားကြီးမြတ်သောကပ်ဆိုးကြီးတားဆီးတဲ့ရထားမတော်တဆမှုစဉ်အတွင်းတစ်မြစ်ထဲသို့ထိုးချက်ချင်းရေခဲသေတ္တာထဲမှာပလပ်စတစ်အနိစ္စရောက်လေ၏။
US မှာရထားပျက်ကျမှု 10 / 03 / 2015 မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားအမေရိကန်ပြည်နယ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်အံ့သြတဲ့ရထားမတော်တဆမှု: အမေရိကန်လေယာဉ်ပျက်ကျလေ့ကျင့်။ ရထားလမ်း TR လှုပ်ရှားမှု edemeyince အားဖြင့်မီးရထား၏သက်ရောက်မှုများကကွဲခဲ့သည်ကုိုကြည့်င်း၏ဘီးပေါ်တွင်ဖြစ်ပါသည်။ ကလူများစွာဒဏ်ရာရပုလွဲသွားရထားများ၏မြှောက်ကိန်းအကျိုးသက်ရောက်မှု။ 54 လူတွေကမွန်းတည့်အချိန်၌မနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောမတော်တဆထိခိုက်မှုအတွက်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ထိတ်လန့်သောဗီဒီယိုအဖြစ်အပျက်၏အချိန်လေး၏တခဏမှာတော့တစ်ဦးချင်းစီကဒုတိယမိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့်ရှုမြင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ ထိတ်လန့်ယာဉ်မတော်တဆမှုပြီးနောက်ခရီးသည်အံ့ဖှယျနညျးငြိမ်ဝပ်ဟာ 173 အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ အရာရှိများကြောင့်အကျိုးအမြတ်မှစတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ တတိယရထားမတော်တဆမှုများကကြားဖြတ်ခဲ့သည့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, အတွက်နောက်ဆုံးနှစ်လ၌တည်၏။ New York ကဖေဖော်ဝါရီလ ...
US မှာသေလွန်သောသူတို့သည်5(ဗီဒီယို) လေ့ကငျြ့ပေးဖြုတ်ချ 13 / 05 / 2015 US မှာသေလွန်သောသူတို့သည်5လေ့ကျင့်ဖြုတ်ချ: ထွက်ဖြုတ်ချခဲ့သောအမေရိကန်မြို့တော်ဝါရှင်တန်ဒီစီ, New York ကခရီးသည်တင်မီးရထားမှ Philadelphia တွင်အနီးလွဲချော်ရပ်တန့်။ အနည်းဆုံးလူငါးဦးမတော်တဆမှုသေဆုံး, ခြောက်လလူတွေအများအပြားမိုးသည်းထန်စွာအပါအဝင်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ Philadelphia တွင်မြို့တော်ဝန်မိုက်ကယ် Nutter အနည်းဆုံးလူငါးဦးများစွာသောလူဒဏ်ရာရရှိသည်ဟုဆိုသည်ကား, မတော်တဆမှုမှာသူတို့ရဲ့အသက်ဆုံးရှုံး, သတင်းထောက်များကိုရန်ကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ Nutter သူအဖြစ်ဖော်ပြထားတယ်သောမတော်တဆထိခိုက်မှုများအတွက် "စာသားဟာကြောက်မက်ဘွယ်သောရှုပ်ထွေး" "ငါဤကဲ့သို့သောမျှမမြင်စဖူးပါဘူး" ဟု၎င်းကပြောသည်။ ခြောက်လ၏အခြေအနေကနေဖယ်ရှား 65 အရေးပါသောအခြေအနေကြောင့်ခရီးသည်ဆေးရုံထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ Amtrak ကုမ္ပဏီ, ရထားရဲ့ဖြုတ်ချများ၏အကြောင်းရင်းနှင့် ပတ်သက်. စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကနေကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အပူဘွိုင်လာ၏ကို Maintenance နှင့်မီးရှို့ခံရသောလုပ်ငန်းဘူတာ
@ 12 စက်တင်ဘာလ 14: 00 - 15: 00
ဂျာမန်မီးရထား Deutsche Bahn စာသင်ခန်းထဲမှာရှိနေဆဲ
တင်ဆောင်လာသောဝန်ကြီးချုပ်မြန်ရထား Pass selams Sapancay pas Band မှ simulated ခဲ့သည်
Erciyes နှင်းလျှောစီးစင်တာ, ကြေညာလိုက်သည်နှင်းလျှောစီးဓာတ်လှေကားလက်မှတ်တွေအခကြေးငွေများ 2020 ရာသီ
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: စက်တင်ဘာလ 10 1870 ရထားလမ်း Haydarpasa-Izmit
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ပြည်နယ်လေဆိပ်များအာဏာပိုင် Sharp က: 'လေကြောင်းဆိုင်ရာတူရကီရဲ့မကျြနှာကို flux' '
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဘီးအဖွဲ့ဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ)
@ 10 စက်တင်ဘာလ 14: 00 - 15: 00
အမေရိကန်ရထားမတော်တဆဖြစ်ပွားမှု: ဒဏ်ရာရသူ 4
US မှာသေလွန်သောသူတို့သည်5(ဗီဒီယို) လေ့ကငျြ့ပေးဖြုတ်ချ
အပတ်စဉ်ရထားအသွားအလာ Volume ကို US မှာ 5,9 ရာခိုင်နှုန်းခန့်တိုးမြှင့်
အပတ်စဉ်ရထားအသွားအလာ Volume ကို US မှာ 0,8 ရာခိုင်နှုန်းခန့်တိုးမြှင့်
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ စက်တင်ဘာလ 2019 (176) သြဂုတ်လ 2019 (507) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)
အစ္စတန်ဘူလ်ညဆငျးရဲဒုက်ခ Shock! ဝန်ဆောင်မှုပို့ကုန်၏ .. Marmaray 24 နာရီ